CLEANING CHALLENGE: 2 tapritrisa Ariary ny loka ho an’ny laharana voalohany - ewa.mg
News - CLEANING CHALLENGE: 2 tapritrisa Ariary ny loka ho an’ny laharana voalohany
Fanadiovana sy fandaminana ny ao an-tokantrano. Hetsika voalohany karakarain’ny Fondation Terra ny Cleaning Challenge. Fifaninanana momba ny fanadiovana, sy fandaminana ary fanavaozana ny ao an-tokantrano izy ity. Miara-miasa amin’ny orinasa Somapro, mpamatsy ny vokatra momba fahadiovana sy fidiovana Impec ny fikambanana amin’ny fanatanterahana ny hetsika. Ireo mpiasa ao amin’ny Terra group no mandray anjara amin’izany. Araka ny fanazavan’i Lalatiana Robine, tomponandraikitra voalohany ao amin’ny Fondation Terra fa tokantrano 13 eo no mpifaninana ary mandritra ny roa volana ny faharetan’ny fifaninanana. Isan-kerinandro dia hahazo fiofanana ireo mpifaninana ka lohahevitra ho resahana amin’izany ny fanadiovana, ny fahadiovana sy ny fahasalamana, ny fandaminana. Amin’ny alalan’ny sary maneho ny fahadiovana, fandaminana, alefan’ny mpandray anjara no hitsarana azy ireo. Hisy ihany koa ny fitsidihana tsy misy fampilazana ny tokantranon’izy ireo ary anisany hahazoana naoty izany. Izay manana naoty ambony indrindra no mahazo ny loka voalohany: 2 tapitrisa Ariary miampy ny amboara “Clean Family Terra”. 500.000 Ariary kosa ny ny loka ho an’ny laharana faharoa.
Tao anatin’ny telo taona no niketrahana ny Fondation Terra. Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy ny 11 septambra 2021 teny Ambodimita ny fijoroan’ity fikambanana ara-tsosialy an’ny Terra Group ity. Misy orinasa telo mivondrona ao amin’ny Terra Group dia ny Agricom, mpamokatra, mpamatsy fanafody sy fitaovana momba ny tontolon’ny fambolena sy fiompiana; ny Ferme d’Ivato, mampiasa fanafody biolojika, mamokatra huile essentielle, legioma, voankazo; ny hôtel Combava”, hoy i Lalatiana Robine, Tale jeneralin’ny Terra Group. “Niforona ny Fondation Terra noho ny fahatsapan’ny mpiara-miasa fa mila mandray andraikitra, tsy eo anivon’ny orinasa ihany fa eo amin’ny fiainana andavanandro. Mila mandray andraikitra hampiova fomba fijery, fomba fanao”, hoy ity tomponandraikitra voalohany ao amin’ny Fondation Terra ity. Nambarany fa “mandroso miaraka hatrany” ny vinan’ny Fondation. Fanatsarana ny tontolo ambanivohitra ny hetsika manaraka ho karakarain’ny fikambanana aorian’ity Cleaning Challenge ity.
Cet article CLEANING CHALLENGE: 2 tapritrisa Ariary ny loka ho an’ny laharana voalohany est apparu en premier sur déliremadagascar.
L’article CLEANING CHALLENGE: 2 tapritrisa Ariary ny loka ho an’ny laharana voalohany a été récupéré chez Délire Madagascar.
Maevatanana : Miaramila voalaza fa nandoro tanana sy namono olona, an-dalana ny fanadihadiana
Ny herinandro ambony teo no nitranga ity fandoroana tanana ary fakàna an-keriny olona ary fanagiazana entan’olona ity, tany amin’ny tanana iray ao amin’ny fokontany Ambohimiandra, kaominina Morafeno, distrikan’i Maevatanana, izay voalaza fa nataona miaramila valolahy. Nitohy hatramin’ny alarobia teo moa izy io. Izany dia araka ny taratasy fitarainana nataon’ireo mponina tany an-toerana, izay nampandalovin’izy ireo tao amin’ny fokontany sy ny kaominina tany an-toerana. Araka ny fantatra dia efa an-dalana ny fanadihadiana mahakasika ity tranga ity. « Efa henonay taty amin’ny Fibaikoana io tranga io, hoy ny avy eo anivon’ny Seraseran’ny Tafika, raha nanontanianay. Hatreto dia tsy mbola afaka milaza izahay fa nisy ilay tranga na tsia. Efa nisy olona nalefa any an-toerana ary mbola tsy nisy tatitra aloha. Ny azo antoka fotsiny dia raha tena nisy tokoa ilay tranga dia tsy maintsy hisy ny fepetra horaisina amin’ireo nahavanon-doza, raha tena miaramila avy ato aminay tokoa no nahavita izany ». Etsy andanin’izay ihany koa dia tsy mipetra-potsiny ry zareo avy eo anivon’ny zandary misahana iny faritra iny, izay nandray an-tanana avy hatrany ny raharaha, raha vao nahare fotsiny ilay vaovao. « Ny Kômandin’ny vondron-tobim-paritra Maevatanana mihitsy no nalefa tany amin’io toerana io hanao ny fanadihadiana rehetra », hoy ny tompon’andraikitra. « Saingy hatreto ihany koa dia tsy mbola nisy tatitra tonga, noho io tanana io lavitra sy saro-dalana fa indrindra sarotsarotra ihany koa ny fifandraisana any an-toerana », hoy hatrany ny fanazavàna azo. Raha tsiahivina tokoa ity tranga ity, dia ny alakamisy 15 novambra lasa teo no voalazan’ireo mponina fa nisy miaramila valolahy, niaraka tamina « Quartier mobile » roalahy. Voalaza fa tonga hanao fanadihadiana izy ireo tao amin’io toerana io ary nisy olona nalain’izy ireo. Nivadika anefa ny rasa fa lasa takalon’aina ireto farany, ary notakiana volabe mba hamotsorana azy. Nisy basy roa ihany koa, izay voalaza hatrany fa ara-dalàna tanteraka nogiazan’izy ireo ary nitakiana vola ihany koa ny fangalàna izany. Fa tsy vitan’izay fa taorian’io dia nodoran’izy ireo ny trano maromaro : 10 tamin’izany ny tranon’olona, ary ny dimy fitoeram-bary. Ny alarobia lasa teo dia toa hoe niveren’ireto andian’olona ireto indray izany tanana izany ary vao mainka niampy ny trano nodoran’izy ireo. Tamin’io fotoana io no nisy aina nafoy, araka ny vaovao voaray hatrany. Mitaraina araka izany ireo mponina ary miantso ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny avy mba hijery akaiky ity famoretana mahazo azy ireo ity. Ratantely / m.LL’article Maevatanana : Miaramila voalaza fa nandoro tanana sy namono olona, an-dalana ny fanadihadiana a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Avy amin’ny filoha mivady: nahazo «tohanaina» ny mararin’ny Covid-19
Mahatsiaro manokana ireo mararin’ny Covid -19 rehetra ny filoham-pirenena mivady ka nanolotra tohan’aina ho azy ireo. Nanombohana izany, teny amin’ny CTC Alarobia ho an’ny omaly, ka marary 220 no nisantarana azy. Hahazo izany avokoa ny mararin’ny Covid-19 rehetra, araka ny toromariky ny filoha. Hisy ihany koa ny fizarana ny tohan’aina ho an’ireo mararin’ny Covid-19 rehetra hatrany amin’ny faritra. Hisitraka ihany koa ny marary eny anivon’ny hopitaly mandray ny marary. Hita ao anatin’ny harona ho an’ny marary tsirairay ny “yaourt”, ny tantely na ny kaonfitira, ny sôkôla, ny ronono vovony, ny “spiruline”, ny “gel hydro-alcoolique”, ny “baumes” fosa, ny lamba fikarotra. Nametraka hafatra sy fankaherezana manokana isaky ny marary ihany koa izy mivady ho fampahatsiahivina azy ireo fa tsy irery ireo marary miatrika ny aretina sy ny fitsaboana.L’article Avy amin’ny filoha mivady: nahazo «tohanaina» ny mararin’ny Covid-19 a été récupéré chez Newsmada.
Andro maneran-tany ho an’ny boky…: manomboka anio hatramin’ny 30 avrily ny fankalazana
23 avrily, Andro maneran-tany ho an’ny boky sy ny zon’ny mpamorona. Tsy diso anjara amin’ny fankalazana izany ny eto Madagasikara amin’ny alalan’ny hetsika karakarain’ny minisiteran’ny Serasera sy kolontsaina, haharitra hatramin’ny 30 avrily izany.Maro ny hetsika anamarihana ny Andro maneran-tany ho an’ny boky sy ny zon’ny mpamorona, ho an’ny eto Madagasikara, amin’ity. Somary hiova endrika izany noho ny zavamisy ankehitriny, toy ny fanentanana ny mpikirakira ny tambajotran-tserasera “facebook”. “ Manomboka anio, zarao amin’ny kaonty fesibokinao ny boky novakinao na ny ampahan-dahatsoratra nalaina tamina boky tianao, na sary, asio hashtag :#NdaoHamakyBoky#WorldBookDay#MCC#BNM izany”, araka ny nambaran’ny eo anivon’ny MSK. Faharoa, hisy fandaharana manokana maromaro handeha amin’ny fahitalavitra TVM sy ny radiom-pirenena RNM hanamarihana izany. Hisy lohahevitra manodidina ny boky sy ny vaky boky eto Madagasikara toy ny hoe, ahoana ny hampitana boky ny ankizy?, ny zon’ny mpamorona, ny vehivavy sy ny literatiora, inona ny atao hoe literatiora, ny asan’ny mpamoaka boky, ny hoavin’ny literatiora malagasy? Haharitra eo amin’ny 15 hatramin’ny 20 minitra eo ny fandaharana iray ary handeha isan’ora izany. Ao anatin’izany, hisy ny famintinana ny zava-bitan’ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina, indrindra amin’ny fanatsarana sy ny fampiroboroboana, ny fanapariahana ny boky sy ny vaky boky manerana ny Nosy. Tsy ny anio 23 avrily ihany fa hatramin’ny 30 avrily ho avy izao dia hisy ny hetsika anamarihana ny Andro maneran-tany ho an’ny boky sy ny zon’ny mpamorona, ohatra amin’izany, ny fandaharana Korambe Mandraigna” amin’ny RNM dia hiresaka mahakasika ny tontolon’ny boky eto Madagasikara.Marihina fa ny minisiteran’ny Serasera sy Kolontsaina, dia manome vahana ny mpanoratra sy ny mpamorona ka hiezana hividy ireo karazana boky malagasy ho entina hanampiana azy ireo, izay hiaraha-miasa amin’ny Unesco izany.NarilalaL’article Andro maneran-tany ho an’ny boky…: manomboka anio hatramin’ny 30 avrily ny fankalazana a été récupéré chez Newsmada.
Nafenina teo an-tokotany…: basy vita gasy mitovy amin’ny Kalachnikov tratran’ny polisy
Saron’ny polisy miasa ao amin’ny kaomisarian’i Manandriana, ny alarobia maraina teo tamin’ny 7 ora sy 30 mn tao amina tokantrano iray ny basy vita gasy mitovitovy amin’ny basy Kalachnikov type AK 47.Raha ny tatitra voaray, nahazo loharanom-baovao ny polisy miasa ao amin’ny kaomisaria Manandriana momba ny fisiana basy vita gasy ao amina tokantrano iray ao amin’ny kaominina ambanivohitr’Ambovombe distrikan’i Manandriana. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny polisy nanao ny fitsirihana sy ny famotorana ka fantatra fa ao amina tokantrano iray ao an-toerana tokoa no misy ity fitaovam-piadiana ity. Afakomaly maraina, tonga nisava ilay trano ny polisy ka lehilahy iray tompon-trano no nosamborina avy hatrany. Hita tao an-tranony nandritra ny fisavana nataon’ny polisy ny fitaovana maro toy ny antsy isan-karazany. Nandritra ny famotoran’ny polisy ity lehilahy ity no nanoroany ny toerana nanafenany ilay basy vita gasy mitovy amin’ny basy Kalachnikov nafeniny tao an-tokotaniny ihany. Niaiky ity lehilahy ity fa azy tokoa io fitaovam-piadiana io. Mitohy, araka izany, ny famotorana ataon’ny polisy mikasika ity fahitana fitaovam-piadiana ity.J.CL’article Nafenina teo an-tokotany…: basy vita gasy mitovy amin’ny Kalachnikov tratran’ny polisy a été récupéré chez Newsmada.
Ambassade du Japon : Dotation de 3 ambulances d’occasion pour le CHUJRA
La signature de la convention a été effectuée à la Résidence du Japon hier. Le centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona devrait bientôt voir sa flotte d’ambulances être renforcée. C’est ce qui a été avancé lors de la signature de convention portant sur le projet de dotation de trois ambulances recyclées au CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona, hier. D’une valeur de 64 037 euros, soit 291 944 683 Ariary, le projet en question rentre dans le cadre des « aides aux micro-projets locaux en faveur de la sécurité humaine», dans lequel le «Gouvernement du Japon fournit activement des véhicules utilitaires recyclés comme des camions de pompiers, des ambulances, des camions-citernes, etc., au profit des pays en voie de développement du monde entier». Ainsi, ce projet consiste à «fournir trois ambulances qui ont été concédées par les autorités locales au Japon et à les réutiliser à Madagascar». Il conviendrait de noter que les trois ambulances d’occasions devant être dotées le CHU JRA devraient être remises à neuf avant d’être envoyées à Madagascar. Comme l’on a fait savoir durant la signature de la convention d’hier «les ambulances arriveront à Madagascar parfaitement prêt à l’emploi après avoir subi un entretien minutieux et nécessaire, y compris le changement vers le volant à gauche». José Belalahy L’article Ambassade du Japon : Dotation de 3 ambulances d’occasion pour le CHUJRA est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Ambassade du Japon : Dotation de 3 ambulances d’occasion pour le CHUJRA a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Hopitaliben’ i Toamasina: Frantsay iray matin’ny Covid-19
Tera-tany vahiny mitondra ny zom-pirenena frantsay iray indray no namoy ny ainy, ny alin’ny alakamisy lasa teo, tamin’ny 10 ora alina tao amin’ny hopitaliben’ i Toamasina, raha ny angom-baovao tao an-toerana. Taorian’ny fahafatesany, tsy nisy mpikarakara sahy nandray an-tanana ity vahiny namoy ny ainy ity ka voatery naiditra tao amin’ny tranom-paty aloha. Hatramin’ny omaly antoandro, tsy nisy nitonona ho fianakavina na olona mahafatatra azy handray ny razana. Vokany, nafindra etsy amin’ny hopitaly manara-penitra Morafeno indray ilay razana hanaovana fitiliana hafa ny mombamomba azy.Lasa nitarika tahotra sy horohoro amin’ny mpiasan’ny fahasalamana ny raharaha toy izao. Nolazaina fa matin’ny covid-19 ity vahiny ity nefa tsy halevina avy hatrany fa havezivezy etsy sy eroa indray. Raha ny angom-baovao natao no nahafantarana fa irony vazaha tsy manana toerana matotra hipetrahana irony ity vazaha ity fa izay vehivavy mety hampiantrano azy no hipetrahany rehefa mety ny fifanarahana.SajoL’article Hopitaliben’ i Toamasina: Frantsay iray matin’ny Covid-19 a été récupéré chez Newsmada.
Outline Movies: hivoaka rahampitso ny « Tilitilio »
« Tilitilio », horonantsarimihetsika novokarin’ny Outline Movies. Hivoaka rahampitso alarobia 02 desambra 2020 manerana ny Nosy izany. « Tonga ny fotoana ; mila mitodika amin’Andriamanitra isika, fa Andriamanitra tsy avy hiantso ny marina fa ny mpanota hibebaka ». Izany hafatra izany indray no entin ‘ny Outline Movies hamaranana ity taona ity sady hamalifaliany ny mpianakavy manerana ny Nosy amin’ny alalan’ny sarimihetsika « Tilitilio », izay efa nandrasan’ny mpankafy hatry ny ela. Sahaza ho an’ny rehetra izy ity satria ankoatra ny maha fanabeazana azy dia voatilitily ao ny mahatsikaiky sy ny mahafinaritra na dia mampalahelo sy mampitaintaina aza ny tantara. Mpilalao matihanina sy efa fanta-daza avokoa ny ekipa mandrafitra ny Tilitilio koa inoana sy antenaina fa ho tafaray ao ny tia sy ny manina. « Mirary krismasy sy taombaovao sambatra ho an’ny Malagasy rehetra ny outline Movies », hoy ny tompon’andraikitra.NarilalaL’article Outline Movies: hivoaka rahampitso ny « Tilitilio » a été récupéré chez Newsmada.